Miyuu Paul Pogba qorsheynayaa inuu ka tago xagaagan kooxda Manchester United? – Gool FM
Miyuu Paul Pogba qorsheynayaa inuu ka tago xagaagan kooxda Manchester United?
(Manchester) 14 Maarso 2019. Laacibka khadka dhexe ee kooxda Manchester United, Paul Pogba ayaa la soo warinayaa inuu caddeeyey inuusan qorsheynaynin inuu ka tago Red Devils iyo garoonka Old Trafford suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaagan.
Pogba ayaa xiriir aan wanaagsanayn uu kala dhexeeyey macallin Jose Mourinho, xiddiga reer France ayaana sheegay inuu ka tagayo kooxda Man United bishii Janaayo.
Mourinho ayaa laga cayriyey kooxda Man Utd dhammaadkii sanadkii 2018, waxaana lagu bedelay Tababare Ole Gunnar Solskjaer kaasoo si ku meel gaar ah u hoggaaminaya kooxda 20-ka goor ku guuleysatay horyaalka Ingiriiska.
Pogba ayaa qaab ciyaareedkiisii sare la soo laabtay bilihii dhowaa, waxaana uu dhaliyey siddeed gool isagoo caawiyey lix gool oo kale horyaalka Premier League tan iyo markii kooxda hoggaankeeda loo dhiibay macallin Solskjaer.
Wargeyska The Sun ayaa warinaya haatan in Pogba uu u sheegay Man United inuusan qorsheynayn inuu kooxda isaga tago suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaagan, inkastoo laacibkan si weyn loola xiriirinayey inuu dib ugu laaban doono kooxdiisii hore ee Juventus.
25-sano jirkaan ayaa kula guuleystay kooxda Juventus afar horyaalka Serie A intii u dhaxaysay sanadihii 2012-kii illaa 2016-kii, waxaana uu dhowaan sheegay in Turin ay ahayd gurigiisa.
Yeelkeede, xiddiga ku guuleystay Koobka Adduunka 2018 ayaan hadda u muuqda inay sharaf u tahay heshiiska uu kula jiro Man United, isla markaana uusan meelna uga socon kooxda ka arrimisa Old Traffrod.
RASMI: Real Madrid oo durba la soo wareegtay laacibkii ugu horreeyay kaddib markii ay soo ceshteen Zidane....(Waa kuma??)